Faahfaahinta Roadmap-ka Qoyska - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Waterwater ISD 834
Bartayaasha Luqadda Ingiriiska
Baro waxa ku saabsan taageerada ay heli karaan bartayaasha af Ingiriisiga.
Waxaan aaminsanahay in bartayaasha luqadeena ay xubno muhiim ah ka yihiin Dooxada St. Waa koox arday ah oo fasalkeenna u keenaya kala duwanaansho dhaqameed, af iyo khibrad. Waa arday keena sheekooyin kala duwanaan ah oo dhiirrigeliya dareenka weyn ee dadka kale. Waa arday aragtiyo kala geddisan keena fasallada iyo bulshada. Waan ku faraxsanahay inaan fursad u helnay inaan ugu adeegno waxna ka baranno iyaga.
Ujeedada barnaamijka bartaha Ingiriisiga (EL) waa in la hubiyo in ardaydu leeyihiin luqadda bulshada iyo tacliinta ee lagama maarmaanka u ah inay ku guuleystaan guriga, dugsiga, iyo beeshooda.
Dugsiyada Dadweynaha Stillwater Aagga waxay raacaan tilmaamaha MDE ee aqoonsiga bartaha Ingiriisiga (EL). Bartayaasha Ingiriisiga waxaa markii ugu horreysay loo aqoonsaday adeegyo suurtagal ah oo ku saleysan tilmaamayaasha luqadda ee lagu calaamadeeyay Sahanka Luqadda ee Minnesota Nidaamkan waxaa lagu sameeyaa markii ugu horreysay ee la qoro Dugsiyada Dadweynaha ee Stillwater. Shaqaalaha EL waxay baaraan ardayda leh luuqad aasaasi ah oo aan aheyn Ingiriis si loo go'aamiyo u-qalmitaanka. Ardayda ayaa markaa lagu meeleeyaa barnaamijka iyadoo lagu saleynayo dhibcaha u qalmidda.
Waalidiinta waxaa la ogeysiiyaa u qalmida EL sanad dugsiyeed kasta. Ogeysiiskan waxaa ka mid ah:
Casuumaad la kulanka shaqaalaha EL / maamulaha
Diidmada Adeegyada EL
Waalidiintu waxay xaq u leeyihiin inay diidaan adeegyada EL sida lagu soo wargeliyay warqaddeenna wargelinta sannadlaha ah. Waxaa lagu dhiirigelinayaa inay la shaqeeyaan shaqaalaha EL wixii su'aalo ama walaac ah ee ay ka qabaan barnaamijyada EL.
Waxaan bixinaa barasho luqadeed oo ka shaqeysa sidii loo dabooli lahaa baahiyaha ardayda kala luqadeed. Shaqaalaha bartaha Ingiriisiga waxay ka shaqeeyaan inay bixiyaan qaab wax ku ool ah oo ku saabsan barashada luqadda iyadoo wax laga qabanayo baahida aagagga ay u baahan yihiin ardaydooda. Ardayda leh heerarka aasaasiga ah ee Ingiriisiga waxay helayaan taageero aad u xoog badan iyo barashada Ingiriisiga halka ardayda leh heerarka sare ee Ingiriisiga ay helayaan baritaan luuqad tacliineed oo dheeraad ah. Ardayda uqalma waxbarashada gaarka ah waxay heli karaan adeegyada EL iyadoo lala kaashanayo adeegyada looga baahan yahay barnaamijka waxbarashada shaqsiga ah.
Aqoonsiga SLIFE (Ardayda leh xaddidan, hakad, waxbarashada rasmiga ah)
Ardayda leh waxbarashada tooska ah ee la joojiyay (SLIFE) waxay ka kooban yihiin qayb muhiim ah barashada Ingiriisiga. Sharciga Minnesota ee Barashada Ingiriisiga ee Aqoonta iyo Guusha (LEAPS) wuxuu qeexayaa SLIFE inuu yahay bartaha Ingiriisiga ee leh waxbarashadda tooska ah ee carqaladeysa oo buuxisa seddex ka mid ah shanta shuruudood ee soo socda:
Wuxuu ka yimid guri inta badan luuqaddu ku hadasho aan ahayn Ingiriis, ama yaa badanaa ku hadla luqad aan Ingiriisiga ahayn.
Wuxuu galayaa iskuulka Mareykanka fasalka 6aad kadib.
Uu ugu yaraan laba sano ka hooseeyo iskuulka marka loo barbardhigo ardayda dhigata Ingiriisiga.
Hawlaha ugu yaraan laba sano ka hooseeyaan heerka fasalka ee akhriska iyo xisaabta.
Waxaa laga yaabaa in si horudhac ah loogu qoro barashada Ingiriisiga luqadiisa hooyo. ( Minn. Stat. § 124D.59, Subd. 2a)
Shuruudaha looga baxo
Si ardayda loogu tixgeliyo inay aqoon u leeyihiin ACCESS 2.0 ee imtixaanka ELs iyo inay ka baxaan barnaamijka EL, ardaygu waa inuu lahaadaa ugu yaraan 4.5 wadarta dhibco isku dhafan ama ka sareeya IYO seddex ka mid ah afarta qaybood (dhageysiga, hadalka, akhriska, iyo qorista) ka weyn ka badan ama u dhigma 3.5. Waalidiinta waa la ogeysiin doonaa markay ardaydu gaaraan buundada ka bixitaanka u qalmida.